musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » Vanenge makumi mana nevana vakaurawa, makumi masere vakakuvara muJakarta moto wejeri
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Bhokisi rakazara, iro rakagadzirirwa kubata vasungwa makumi mana, rinogarisa vanhu gumi nevaviri, akadaro mutauriri wedhipatimendi remajeri kuIndonesia Law and Human Rights Ministry.
Moto wakaitika pa2: 20 am nguva yemuno uye wakagara kweinopfuura awa.
Vasungwa vasere vakaiswa muchipatara nekukuvara kunotyisa.
Magetsi mapfupi wedunhu anotendwa kuti ndicho chikonzero chemoto.
MaIndonesia anoteedzera mutemo akataura kuti vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakafa uye vamwe vangangoita makumi masere vakakuvara mumoto wejeri reTangerang padyo neguta guru renyika Jakarta nhasi.
Sekureva kwemukuru wemapurisa eJakarta Inspector General Fadil Imran, vasungwa vese vakakuvara, kusanganisira vasungwa vasere vane kukuvara kwakanyanya kuuraya, vakaendeswa kuzvipatara zviri pedyo nemakiriniki ehutano.
Moto uyu wakaitika na2: 20 mangwanani nguva yemuno uye wakadzimwa na3: 30 mangwanani, uye dunhu remagetsi rakatendwa kuti ndiro rakakonzera moto, akadaro mutauriri wemapurisa eJakarta, Senior Commissioner Yusri Yunus.
Bhokisi rakazara, iro rakagadzirirwa kubata vasungwa makumi mana, rinogaramo vanhu gumi nevaviri, akadaro Rika Aprianti, mutauriri webazi remajeri kubazi reLaw and Human Rights muIndonesia.
Vazhinji vevasungwa vakachengetwa munzvimbo yakawiriranwa ndevaya vaibatanidzwa mumatare ane chekuita nezvinodhaka, maererano naye.
Chibvumirano chitsva chakabvumidzwa nePan Pacific ...